Makakatanwa pakugova nhumbi dzemushakabvu mudzimai wemutungamiri wechikwata chenyika che basketball – Ntu News
September 12, 2021 September 12, 2021 Jasmin Rose	0 Comments	NtuNews Zimbabwe
Munyori: Anesu Angeline Madziro
Mushure mekuviga mudzimai wake uyo akaparara musi wa 1 April gore rino, mutungamiri wechikwata chinomirira nyika ye Zimbabwe chemutambo we basketball Job Kumunda anoti iye pane makakatanwa ekugovewa kwembatya pakati pake namai vemudzimai wake mushakabvu Tendai Gondongwe.
“Kutanga ambhuya vangu vakanditorera vana mushure mekuno mhangara ku Legal Resouce Foundation kuti ndiri kuvanyima vana.
“Mushure mezvo ndakaenda kumatare edzimhosva kuti ndinopiwe mukana wekuva muchengeti wevana.
“Ndapiwa tsamba nhasi (today thursday) ye Social Welfare hanzi vanofanirwa kuuya kumba kwangu nekwa ambhuya uyezve vana vachataura kuti vanoda kugara kupi.
“Ivo varikuti mukuwasha akandisungisa anofanirwa kutanga anodzimisa nyaya kumatare edzimhosva (court) kuti mbatya dzigovewe uyezve vanoti havasi kuzondipa vana,” akadero Kumunda achitaura nepepa nhau rino re NTU News Zimbabwe.
Kumunda anoti zvekare pa dambudziko guru riripo pakati pake na Fildar Dongo amai vemushakabvu nderekuti varikuramba kuti agare nevana achivaendesa kuchikoro.
“Varikuti ndirikuda kuchengeta vazukuru vangu ndozokupa vakura, ini handisikuda nekuti vakarorwa rwepiri neumwe murume handizivi kwavanogara uyezve havadi kuti ndizive kwavanogara.
“Vana vangu umwe ane makore gumi nemaviri (12) umwe mapfumbamwe (9) vavhura zvikoro asi havasati vadzoka uyezve zvavari kufunga handisi kuziva.
Achitsanangura pakatangira dambudziko pakati pake nemhuri ya Gondongwe anoti, “mudzimai wangu aifanirwa kunovigwa kumusha kwa Rusike asi vana ambhuya vakaramba akanovigwa ku Zororo Memorial ku Chitungwiza.
“Mushure mekunge machiremba vawongorora chitunha (after postmortem) vakati Tendai Gondongwe uyo aiva akaremara aiva aparara nechikonzero chedenda renhuta yemusoro (suffered from brian cancer).”
Achitaurawo divi rake kupepa nhau rino Fildar Dongo amai vemushakabvu vanoti “Job Kumunda ane nyaya dze pfuma yanofanira kugadziriswa uyezve vana vake ndiye anavo.
Anobvunza mutori wepepa nhau rino kuti “kuisa nyaya mupepa nhau ndokuchapedza nyaya dzake here?
“Baba vemwana ndivo vanokutenderai kwete ini iye ngaakupei no dzavo uyezve tsvagai dzimwe nhau kwete ya Tendai,” azopindura mutori wenhau apo anga achangobva kudzosa vana kumukuwasha wake uyo azobatsirwa kuwana vana nemapurisa.
Kunyangwe zvazvo asina kuremara Kumunda (able-bodied) akatanga kutamba mutambo we wheelchair basketball mugore ra 2002 pa Danhiko Secondary sezvo mutambo uyu unotambwa chero nevasina kuremara asi vasingatenderwe kuzotamba kumakwikwi anosangana nyika nenyika (able bodies are only allowed to play wheelchair basketball at club level not international tournaments).
Job Kumunda akasangana nemudzimai wake Tendai Gondo uyo akadzidza pachikoro pamwe chete sezvo pachidzidza vakaremara nevasina pamwe chete.
Akava nyanzvi mumutambo uyu kusvika ava kutambira chikwata chine mukurumbira mumutambo uyu mu Zimbabwe che Wolves Wheelchair Basketball Club kusvika azova mutungamiri wacho (coach) newenyika ye Zimbabwe National Wheelchair Basketball. Uyezve aive mutambi wenhabvu (soccer) pa Danhiko Secondary ipapo zvekare kubva mugore ra 2001 kusvika 2004.
← Emalahleni Local Municipality issues warning to service providers concerning fraudulent practices
Digital Vaccine Certificates to Be Introduced →